५० गोलको दौडमा को अगाडि ? — beingrahul on Scorum
५० गोलको दौडमा को अगाडि ?
लिओनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हाल बार्सिलोनाबाट खेलिरहेका मेस्सी र युभेन्टसबाट खेलिरहेका रोनाल्डो गत सिजनसम्म एकै लिगमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा खेल्थे । तर, रोनाल्डो यसै सिजको सुरुमा रियलको ९ वर्षे यात्रालाई पुर्णविराम गर्दै युभेन्टस पुगेपछि विश्व फुटबलमा ‘हट केक’का रूपमा रहने खेलाडीको सोझो प्रतिस्पर्धा तोडिएको छ ।
वर्ष २०१८ मा बार्सिलोनाका मेस्सी सर्वाधिक गोलकर्ता बने । उनले सो वर्ष कूल ५१ गोल गरे । उनले क्लब बार्सिलोनाका लागि ४७ गोल गर्दा देश अर्जेन्टिनाका लागि ४ गोल गरे । उनले विगत वर्षझैं यसपटक पनि एक वर्षमा ५० गोलको आँकडा पार गरे ।
तर, युभेन्टसका रोनाल्डोले भने यसपटक ५० गोल पूरा गर्न सकेनन् । उनले २०१८ मा जम्मा ४९ गोल मात्रै गरे। वर्ष २०१८ मा ५० गोल पूरा गर्नबाट चुकेका रोनाल्डो सन् २०१० पछि पहिलोपटक एक वर्षबाट ५० गोल गर्नबाट पनि चुके । यदि उनले ५० गोल पूरा गर्न सकेको भए उनी लगातार ८ वर्ष ५० गोल पूरा गर्ने खेलाडी बन्थे, जुन नयाँ कीर्तिमान पनि बन्ने थियो ।
तर, वर्ष २०१८ को अन्तिम लिग खेलमा साम्पडोरियासँग २ गोल मात्रै गरेका उनी मात्रै १ गोलले महत्त्वपूर्ण रेकर्डबाट चुके । पछिल्लो ८ वर्षको बीचमा रोनाल्डोले २०१८ मा ५० गोल पूरा गर्न सकेनन् । यता, मेस्सीले पनि सो अवधिमा एकपटक ५० गोल पूरा गर्न सकेका छैनन् । मेस्सीले सन् २०१३ मात्रै ४५ गोल गरेका थिए । यसरी हेर्दा पछिल्ला ८ वर्षको बीचमा रोनाल्डो र मेस्सीले ७ वर्ष दुवैले ५० गोल नघाएका छन् भने दुवैले समान एक–एक पटक ५० गोल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
तर, कुनै न कुनै रूपमा यी दुई खेलाडीको प्रतिस्प्र्धा र तुलना हुन छाडेको भने छैन । सम्भवतः विश्व फुटबलमा यो कहिल्यै हुन पनि छाड्ने छैन ।
Soccerfootball newslionel messicristiano ronaldobarcelonajuventus